Nzira yekuvhura sei bank account muRussia? - ALinks
Iwe unogona kuenda kubazi nepasipoti, kunyorera kunyorera, uye kupedzisa chibvumirano cheakaundi yebhangi. Vanogona kukubvunza nezve nhamba yako yekuzivikanwa yemutero (TIN). Uye ivo vanogona kubvunza nezve yako yega inishuwarenzi account nhamba (SNILS). Izvi zvinobatsira bhangi kuziva kana ukachinja pasipoti.
Russia ine network hombe yebhangi ine makuru uye epasirese mabasa emabhangi. Kuwanikwa kweATM kuri nyore kwazvo pano. Russia ine hupfumi hwakasimba uye zvikoro zvepamusoro zvechirungu. Uye vanhu vokuRussia vane ushamwari kune vekunze. Kuve vatorwa isu tinowanzo kunetseka kuti tingavhura sei account yekubhangi muRussia.
Huwandu hweRussia hunosvika mamirioni 142. Iine nhamba huru yevatorwa uye vari mumaguta eMoscow neSt. Nehupenyu hwakasimba uye hwetsika, vatorwa vazhinji vakawira murudo nehupenyu uhu. Chimwe chezvinhu zvekutanga zvauchazoda kuita kana uri kuronga kutamira kuRussia kuvhura account yekubhangi yemuno.
Iwe unofanirwa kuenda kubazi nepasipoti, chikumbiro chakanyorwa, uye kupedzisa chibvumirano cheakaundi yebhangi. Vanogona kukubvunza nezve nhamba yako yekuzivikanwa yemutero (TIN). Uye ivo vanogona kubvunza nezve yako yega inishuwarenzi account nhamba (SNILS). Izvi zvinobatsira bhangi kuziva kana ukachinja pasipoti. Iwe unogona kunyange kuvhura account kubva kumba kwako mune chero anotevera nzira:
Kana iwe uri mutengi webhangi saka unogona kuvhura iyo account nerubatsiro rweakaundi yako kana mobile application.
Nerubatsiro rwebiometric kuburikidza neiyo Unified Remote Identification System.
Nerubatsiro rwemusika. Nzvimbo yepamhepo yekusarudza chigadzirwa chemari uye kupedzisa chibvumirano.
Hazvisungirwe kuti ungoisa mari kuaccount yazvino kana yekuchengetedza. Ivo vanogona kuramba vakavhurika pa zero chiyero kwenguva yakareba. Kana ukasaisa mari mukati memakore maviri bhanga rine kodzero yekuvhara account.
Muzviitiko zvakawanda, vashandi veRussia vanogadzira account yekubhadhara nebhangi. Bhanga iri rinobata mari yekambani yemushandi mutsva wega wega. Ichi chinowanzova chisiri-chikurukurirwa chikamu chekontrakiti yako yebasa. Iyo kambani ichaisa muakaundi yakatemwa pasina ruzivo rwako. Mamwe makambani anoendesa kuakaundi yesarudzo yako. Saka unokwanisa kuisa kubhangi rakasiyana neravanoshandisa. Kana iwe uchida, iwe unogona kufambisa purofiti yako kubva kune imwe account kuenda kune imwe.
MuRussia, kune mazana emabhangi. Saka iwe uchafanirwa kusarudza kuti ndedzipi dzinopa yakanyanya sevhisi, kukosha kwemari, uye nyore.
Unogona kusarudza bhangi hombe kana renyika dzakawanda, saka unozokwanisa kuwana mari yako nekukurumidza. Uye iwe unogona kusarudza iyo bhangi account inonyatsoenderana nezvido zvako. Unogona kuenzanisa mitengo yakasarudzika pane zvigadzirwa zvebhangi semakadhi echikwereti kana zvikwereti. Kana enzanisa mutengo wekutumira mari munyika uye kune dzimwe nyika.
Ndeapi magwaro andinoda kuti ndivhure akaundi yekubhanga?
Mhando dzakasiyana dzeakaundi dziripo mumabhangi eRussia. Kune maakaundi asina kiredhiti, unogona kunyorera chete nepasipoti sehumbowo hwekuzivikanwa. Kana uchida kuvhura account yekubhanga nemamwe masevhisi unofanirwa kuendesa magwaro anotevera:
Mufananidzo ID (pasipoti)
Inoshanda mvumo yekugara
Uchapupu hwekero muRussia (yazvino bhiri rekushandisa rinogamuchirwa)
Kune mamwe maakaundi, ungangoda tsamba yereferensi kubva kune waunoshandira.
Mhando dzeakaundi emabhangi muRussia
Munhu anogona kuvhura akawanda marudzi emaakaundi ebhangi muRussia imwe neimwe ine basa rayo uye rondedzero yacho ndeiyi:
Iyo yazvino account inobvumidza iwe kuti usangochengeta mari chete asiwo kubhadhara kutenga & masevhisi. Inobvumira kutumira kune vanhu nemasangano. Paunotora chikwereti, bhangi rinokuvhurira account yazvino uye unogona kuisa mari yekubhadhara chikwereti.
Deposit account ndeyekuvhura account yekubhanga. Izvi zvinogona kuva mumaruble pamwe chete nemari yekunze - kazhinji mumadhora kana euro. Deposit account haibvumire:
kubvisa mari kubva kumaATM,
kana kuendeswa kune vamwe vanhu.
Mune zvimwe zviitiko, unogona kuendesa iyo yakawedzera mubereko, kana chikamu chayo, kubva kudhipoziti kuenda kuaccount yazvino. Kuti ubvise mari yose, iyo deposit account inofanira kuva pedyo, uye kana zvakadaro, kufarira kunowanzorasika. Zvese zviri pamusoro zvinofanirwa kujeka muchibvumirano chako cheakaundi.
Iyi ihybrid yeazvino uye deposit account. Mabhangi anochaja mhindu pamari iri muakaundi iyi. Iwo kazhinji akakura kupfuura account yazvino. Mune zvimwe zviitiko, vanodarika kufarira pane dhipoziti. Semutemo, haugone kubhadhara kutenga kubva mukuchengetedza maakaundi. Iwe unofanirwa kuendesa mari yako kune yazvino account. Mamwe mabhanga anobvumira kubhadhara kune mamwe masevhisi akadai sezvekushandisa, mitero, uye faindi. Iwe unogona kuita kubhadhara uku kuburikidza nekunyorera kwako kana internet banking.
Iyi account yakakodzera kune vanoisa mari mugoridhe, sirivheri, platinamu, kana palladium. Iko hakuna chikonzero chekutarisa uremu, unogona kuisa kunyange mashoma magiramu esimbi yakakosha muaccount. Semutemo, unogona kuvhara simbi account chero nguva, kana mutengo wesimbi uchikwira. Mbereko haibhadharwe pavari. Mari inowanikwa kubva kuakaundi yesimbi inoiswa pamutero wemari. Kana iyo account yakavhurika kweanopfuura makore 3 iwe unoregererwa kubhadhara mutero.
Ndeapi mabhanga epasirese ari muRussia?
Kune matanhatu makuru mabhanga epasi rese muRussia
Iyo kambani Otkritie Financial Corporation
Mutorwa anogona kuvhura account yekubhangi muRussia?
Ehe, Zvinogoneka kuvhura account yekubhangi muRussia semunhu asiri mugari. Nzira yacho iri nyore. Uye kune maakaundi mumari yekunze nemamwe masevhisi. Izvi zvakananga kune vatorwa.
Mutorwa angavhura sei account yekubhanga?
Vagari vekunze vanogona kuvhura maakaundi ekubhengi muRussia. Mari yacho ichave rubles, maeuro, kana madhora zvichienderana nemagwaro anotevera:
Fomu rekunyorera rakapihwa nebhanga
Mvumo yekugara inoshanda
Humbowo hwekero yekugara
Nekushanda kukuru kwebhangi, zvakakodzera kutarisa mapazi ako epamba ipapo. Kana iripo zviri nyore kuendesa kubhanga renzvimbo. Kunyangwe semunhu asiri mugari unogona kuvhura account yekubhangi muRussia. Iyo nzira iri nyore uye nekukurumidza. Maakaundi mazhinji emari yekunze ndeevatorwa muno. Kubhengi nemabhangi emarudzi akawanda kunopa vimbiso yekuwana mari yako nyore. Sarudza account yekubhangi inokodzera zvaunoda.
Mufananidzo webutiro uri kune imwe nzvimbo muSochi, Russia. Mufananidzo na Igor Starkov on Unsplash
Maitiro ekuvhura account kubhengi muUkraine?
Nzira yekuvhura sei bank account muAnkara?
Mabhangi akanakisa muAndorra
Nzira yekuvhura sei bank account muSyria?
Mabhangi akanakisa muHaiti